Ecommerce manerantany: Fandikana mandeha ho azy vs Masinina vs Vahoaka ho an'ny localisation | Martech Zone
Miroborobo ny varotra ecommerce. Na dia vao 4 taona lasa izay, a Tatitra Nielsen nanolo-kevitra izany 57% ny mpiantsena no nividy tamina mpivarotra antsinjarany tao anatin'ny 6 volana lasa. Tato anatin'ny volana vitsivitsy, ny COVID-19 manerantany dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fivarotana eran-tany.
Ny fiantsenana biriky sy mortara dia nihena be tany Etazonia sy UK, miaraka amin'ny fihenan'ny tsenan'ny mpivarotra antsinjarany any Etazonia amin'ity taona ity dia antenaina ho avo roa heny izay niaina tamin'ny krizy ara-bola folo taona lasa izay. Mandritra izany fotoana izany dia nahita firongatry ny varotra e-varotra an-tsisintany izahay. RetailX vinavina ny e-commerce cross-border ao amin'ny EU dia nitombo 30% tamin'ity taona ity. Any Etazonia, angona avy amin'ny Global-e hita fa ny varotra iraisam-pirenena dia nitombo 42% tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity.
Na aiza na aiza no iorenan'ny marika fivarotanao ny varotra iraisam-pirenena dia mety ho làlan-tokana. Tsy mahagaga raha mitady ny hisambotra an'ity sehatry ny asa vaovao mihamitombo ity ireo mpivarotra manerantany. Na izany aza, mba hisamborana amin'ny fomba mahomby ireo mpanjifa mpivarotra sisintany dia tokony hihoatra ny fanomezana dikanteny tranokala raha vao tonga eo amin'ny tranonkalany ny mpitsidika.
Ireo mpamatsy ecommerce dia tokony hampidirina toerana amin'ny paikadim-pitomboana ataon'izy ireo. Midika izany fa ny fiheverana ireo singa toa ny tenin-drazan'ny SEO, fanomezana sary sahaza ny tsena eo an-toerana - raha mpivarotra eropeana ianao manandrana mivarotra amin'ny tsena aziatika, ny fampiasana sary afovoany-euro fotsiny amin'ny tranokalanao dia hampiala ny anao mety ho mpanjifa.
Ny localisation dia mahazo antoka fa mandray an-tanana ny lozisialy ara-kolotsaina any amin'ireo faritra tadiavinao hivarotra ny tranokalanao.
Mety ho toy ny asa tsy azo atao izany. Trano fivarotana marobe no manana pejy havaozina tsy tapaka an-jatony ary lafo tokoa ny fampiasana mpandika teny matihanina. Mandritra izany fotoana izany dia maro no mety hihevitra ny fandikana ny milina sy ny fametrahana azy ho tsy misy dikany ary diso loatra ka tsy azo ianteherana. Saingy toy ny fantatry ny olona rehetra izay mampiasa rindrambaiko fandikan-teny amin'ny milina, mihatsara hatrany ny teknolojia. Ny teknolojia dia mety ho fitaovana sarobidy tokoa amin'ny localisation tranokala, ary rehefa hiaraha-miasa amin'ny olona tena izy dia mety hahatratra avoavo mahasosotra.
Fandikana mandeha ho azy vs Masinina
Hevi-diso fahita matetika fandikan-teny mandeha ho azy dia zavatra mitovy amin'ny fandikan-teny amin'ny milina, Araka ny hevitry ny Manampahefana momba ny fanatontoloana sy ny fametrahana toerana (GALA):
Fandikana ny milina - Rindrambaiko mandeha ho azy izay afaka mandika ny atiny loharano ho amin'ny fiteny kendrena. Ny haitao fandikan-teny amin'ny milina dia misy ny mpamatsy toa ny Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translator, DeepL, sns. Fa ireo mpamatsy fandikan-teny amin'ny milina izay ampiharina amin'ny tranokala iray dia mazàna ihany no hametaka ireo tenin-drazana raha vao eo amin'ilay tranonkala ny mpitsidika.
Fandikan-teny ho azy - Ny fandikan-teny mandeha ho azy dia mandrakotra ny fandikan-teny amin'ny milina fa mihoatra lavitra noho izany. Ny fampiasana vahaolana amin'ny fandikan-teny dia tsy hoe miresaka ny fandikana ny atiny ihany koa fa ny fitantanana sy fanovana ny atiny, ny SEO isaky ny pejy voadika, ary avy eo dia mitantana ny famoahana an'io atiny io, mety ho velona nefa tsy mila manandratra rantsan-tànana ianao. Ho an'ireo mpivarotra am-barotra, ny vokatra azo avy amin'ity fampiharana ny haitao ity dia afaka manatsara ny varotra iraisam-pirenena ary mahomby tokoa.
Fandikana olona vs Masinina
Ny iray amin'ireo lesoka lehibe amin'ny fampiasana ny fandikan-teny amin'ny milina amin'ny toerana misy azy dia ny fahitsiana. Mpivarotra maro no mahatsapa fa ny fandikan-teny feno an'ny olombelona no hany làlana azo antoka mandroso. Na izany aza, ny sandan'izany dia goavana sy mahasakana ny mpivarotra maro - tsy lazaina intsony fa tsy mitandrina ny fomba hampisehoana an'io votoaty voadika io.
Ny fandikana ny masinina dia afaka mamonjy fotoana betsaka aminao ary miankina amin'ny mpivady fiteny voafantina sy ny fahaizany mivoatra sy mahay ny fandikan-teny ho an'io mpivady manokana io. Nefa lazao, raha tombanana ho an'ny ballpark fa tsara ny fandikana ny 80% amin'ny fotoana, ny hany mila ataonao dia ny mahazo mpandika teny matihanina hanamarina sy hanitsy ireo dikanteny mifanaraka amin'izany. Amin'ny alàlan'ny fahazoana fandikana milina voalohany dia manafaingana ny fizotranao amin'ny fanaovana ny tranokalanao amin'ny fiteny maro ianao.
Raha jerena amin'ny lafiny ara-bola, io safidy io dia hodinihina lehibe. Raha manakarama mpandika teny matihanina ianao hanombohana hatrany am-boalohany ary hiasa amina pejin-tranonkala be dia be, dia mety ho astronomia ilay volavolan-dalàna hofehezinao Fa raha ianao nanomboka miaraka amin'ny sosona voalohany amin'ny fandikan-teny amin'ny milina ary avy eo dia mitondra mpandika teny olombelona hanao fanitsiana izay ilaina (na angamba miteny amin'ny fiteny maro ny ekipanao) na ny asan'izy ireo sy ny vidiny ankapobeny dia hihena be.
Ny fametrahana ny tranokala dia toa tetik'asa mampivadi-po, fa ny fikirakirana tsara ny teknolojia sy ny herin'ny olona dia tsy asa lehibe araka ny eritreretinao azy. Ny ecommerce cross-border dia tokony ho tetika ho an'ny mpivarotra mandroso. Nielsen nitatitra izany 70% ny mpivarotra izay niditra an-tsokosoko tao amin'ny e-varotra andrefana dia nahasoa tamin'ny ezak'izy ireo. Ny fidirana amin'ny localisation dia tokony hahasoa raha vita amin'ny teknolojia sy ny fetran'ny teknolojia ao an-tsaina.
Tags: fandikan-teny mandeha ho azydeeplvarotra manerantanyecommerce manerantanyfandikan-tenytoeranaLocalisationfandikan-teny amin'ny milinafandikan-teny amin'ny tanana